I-Sunscreen for Baby & Toddler | Ezempilo Nokuvimbela | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
I-Sunscreen for Baby & Toddler | Ezempilo Nokuvimbela
Izingubo ezifanele ilanga zengane nezingane ezincane
Izinyathelo ezengeziwe zokuzivikela
Ukuze izingane nezingane zijabulele ngokugcwele ilanga, kubalulekile ukuthatha izinyathelo ezithile zokuqapha. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi, ngoba ilanga eliqondile kufanele libe yizingane ezincane kuze kuphele iminyaka engu-2.
Isikrini esiluhlaza esikhanyeni sesikhumba sabantwana nezinsana
Lokhu kubalulekile ngoba isikhumba sezingane nezinsana sizwela kakhulu. Ikakhulukazi uma kuziwa emisebeni ye-UV.
Ukuvikelwa kwelanga kwezingane nabancane - naphezu kokuphikiswa ngenkathi ukhilimuza
Isikhumba sisalokhu sincane kakhulu eminyakeni yokuqala yokuphila futhi futhi ukuvikeleka kwe-UV, okuzungezile isikhumba, kufanele kuqala kuthuthukise okwenzeka eminyakeni yokuqala yokuphila. Yiqiniso, izingane kufanele zinikezwe njalo ithuba lokudlala, ukudlala nokuhamba ngaphandle. Yiqiniso, njengoba izingane ziphoqeleka ukuthi zitholwe emisebeni ye-UV, kufanele kuthathwe izinyathelo zokuzivikela.
Kubalulekile ukuthi abantwana basebenzise iningi leminyaka yabo yokuqala yokuphila emthunzini. Ikakhulukazi ngalesi sikhathi, izingane kufanele zivezwe ngokuncane ngangokunokwenzeka noma ngokuncane ngangokunokwenzeka ilanga eliqondile. Izikhala ze-shady zihle lapha.
Ilanga eliqondile kufanele livinjelwe ngisho nangesikrini sokushisa kwelanga njengenhlanzi noma i-parasol, njengoba kungase kubangele ukuthi izingane zishise kakhulu. Ngonyaka wokuqala wokuphila kufanele ukwenze ngaphandle kwesihenqo selanga. Lokhu kungaholela ngokungadingekile isikhumba esibucayi kakhulu kwabancane.
Kubalulekile futhi ukuthi amafutha omntwana awusona isikrini selanga. Ngamafutha, i-photosensitivity yengane yesikhumba isakhuthazwa. Kodwa hhayi kuphela ezinganeni, ngisho nasezingane kuze kube sesikoleni samabanga asekuqaleni, kubalulekile ukuthi bagweme ilanga elivuthayo. Kwaphela ihora ngehora, izingane kufanele zidlale, ziphume futhi zihambe emoyeni omusha. Lokhu kusekela ukuthuthukiswa kwengane. Ngokufanayo nokwakheka kwe-vitamin D. ebalulekile.
Kodwa ilanga eliqondile liyakugwema ngisho nangemva kweminyaka emibili yokuqala yokuphila. Lokhu kubangelwa ukuthi isikhumba sezingane asikwazi ukukhiqiza izingulube, eziyingxenye yokuvikelwa kwemvelo, ngokwanele nangokusheshisa ngokwanele. Kokubili ukushisa kwelanga nokubomvu kufanele kugwenywe ngazo zonke izindleko. I-sunscreen ephumelela kakhulu isalokhu igcwele izindawo ezinomthunzi kanye nezingubo ezengeziwe zelanga.
Ngaphandle kwezindawo ezimnyama, i-sunscreen engcono kakhulu yizingubo ezifanele ilanga. Ikakhulukazi ikhanda, ikakhulukazi entanyeni, izindlebe nobuso zibucayi kakhulu. Ngakho-ke, ingane kufanele njalo igqoke i-cap, ihembe, noma okunye elangeni. Zonke ezinye izingubo kufanele zibe yi-airy futhi zisakaze umzimba wonke ngangokunokwenzeka.
Kumele futhi kuqashelwe ukuthi akuzona zonke izinto eziqinile zelanga. Kodwa-ke, kunezambatho ezikhethekile zelanga, ezihlinzeka ngokuvikeleka kangcono ngezindwangu ezikhethekile.
Esimweni esihle kunazo zonke lezi zihambisana ne-UV standard 801 futhi zibe nesici sokuvikelwa kwe-UV okungenani i-30. Futhi izicathulo, lezi kufanele zihlanganise unyawo oluningi ngangokunokwenzeka.
Ama-sunscreen njengesilinganiso esengeziwe
Ngaphandle kwezembatho ezifanele, zonke izingxenye zomzimba ezingavulwe kufanele zivikelwe yisikrini esilungile sokukhanya kwelanga. Kumele kuqashelwe ukuthi ukhilimu njalo akufanele kubangele izingane zivunyelwe ukudlala elangeni elivuthayo. Sebenzisa kuphela i-sunscreen kuphela eyenzelwe izingane.
Ngaphezu kwalokho, umuntu kufanele aqiniseke ukuthi imali idla isikhumba esibucayi sezingane ngaphezu kwama-lotions nama-creams. I-sunscreen ekhethiwe kufanele ivimbele ama-ray amabili we-UV-A ne-UV-B futhi kufanele futhi okungenani ibe ne-SPF eyodwa ye-20. Zonke izindawo ezingambuliwe kufanele zikhishwe ngamaminithi we-30 ngaphambi kokuphuma. Futhi, kufanele kusetshenziswe isikrini selanga esanele.
Uma kuhleliwe ukuhlala ngaphandle isikhathi eside, ukumisa kufanele kuphindwe. Ikakhulukazi emanzini, ingozi yokushisa ilanga yanda. Ngakho-ke, kufanele kusetshenziswe isikrini selanga esingenanzi amanzi.
Njengoba uzwela ilanga njengoba isikhumba singamehlo. Uma lezi zinzima kakhulu yi-UV-B, zingabangela ukuvuvukala kwe-conjunctiva ne-cornea.
Izibuko zezingubo zezingane kufanele zigcine imisebe ye-UV ngokukhethekile ethembekile
Yingakho ngisho nezibuko zelanga ezivikelwe ngokushona kwelanga akufanele zilahleke.
Kodwa-ke, kubalulekile ekuvikelweni kwelanga ukuthi izingane zinesibonelo esihle, ngakho bonke abazali kufanele banakekele ukuvikelwa kwelanga elanele. Ngakho abancane babheka eminyakeni yokuqala, ukuziphatha okulungile elangeni eliqinile.
Ngakho abazali akufanele bachithe isikhathi eside kakhulu elangeni elivuthayo futhi bahlale bezivikela ngezingubo ezifanele kanye ne-sunscreen.
Lahla i-pacifier | Ingane encane